ReporterNepal Updating you… » विविध
फेसबुकले किन हटायो दुई सय एप्स ?
काठमाडौं, १ जेठ । फेसबुक प्रयोगकर्ताका डाटाहरु दुरुपयोग तथा चोरी गर्ने एपहरुमाथि कारबाही सुरु गरिसकेको छ । यसैअन्तर्गत फेसबुकले पहिलो चरणमा फेसबुकमा क्रियाशील २ सय वटा एपलाई हटाएको छ । प्रयोगकर्ताका डाटा चोरी भएकोपछि विवादमा तानिएको फेसबुकले डाटा गोपनियताका लागि कडा कदम चाल्ने घोषणा गरेकोमा अनधिकृत एपहरुमाथि निलम्बन सुरु गरेको हो । फेसबुकले निलम्बन गरिएका […]
यस्तो छ नोकिया एक्सः लिक भयो तस्वीर
काठमाडौं, ३१ वैशाख । नोकिया ब्राण्डका स्मार्टफोन उत्पादन गर्ने एचएमडी ग्लोबल कम्पनीले अहिलेसम्म बजारमा विभिन्न ५ वटा नोकिया स्मार्टफोन लञ्च गरिसकेको छ । आफ्नो फ्लागसीप ह्याण्डसेट नोकिया एक्स छिटै नै सार्वजनिक गर्ने तयारी अहिले कम्पनीले गरिरहेको छ । र, आगामी मे १६ मा नोकिया एक्स लञ्च हुनेछ । नोकिया एक्सको बारेमा लामो समयदेखि चर्चा परिचर्चा […]
पेटको बोसो घटाउने १० उपाय
काठमाडौं, ३० वैशाख । पेटको बोसो कम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । घरमै बसेर तपाईं अनफ्नो बेसो घटाउन चाहनुहुन्छ भने यी तरिका अपनाउनुहोस् । १ कागती पानीले दिनको सुरुवातः आफ्नो दिनको सुरुवात कागती पानीले गर्नुहोस् । यो पेटमा जम्मा भएको अतिरिक्त बोसोलाई कम गर्ने प्रभावकारी घरेलु उपाय हो । मनतातो पानीमा […]
घरमा लगाउनुहोस् स्मार्ट चाबी, मोबाइलबाटै हुन्छ कन्ट्रोल
काठमाडौं, २४ वैशाख । अब आधुनिक सुविधायुक्त स्मार्ट घरको मुख्य पाटोको रूपमा तपाइंले स्मार्ट चाबीलाई लिन लिन सक्नुहुनेछ । स्मार्ट चाबीले तपाईले चाहनुभएको मान्छेलाई मात्रै प्रवेश गर्न र बाहिर जान दिने मात्र होइन यसले तपाई घर बाहिर भएको अवस्थामा पनि तपाईको घरमा को मान्छे प्रवेश गरिरहेको छ र को बाहिर गइरहेको छ त्यसको निगरानी गर्छ । स्मार्टचाबीको […]
ट्विटरमा समस्या, पासवर्ड परिवर्तन गर्न आग्रह
काठमाडौं, २१ वैशाख । तपाईंले ट्विटर प्रयोग गर्नु हुन्छ भने पासवर्ड परिवर्तन गरिहाल्नुस् । ट्विटरले आफ्ना सबै प्रयोगकर्तालाई पासवर्ड परिवर्तन गर्न भनेको छ । आन्तरिक नेटवर्कमा केही समस्या देखिएकाले ट्विटरले आफ्ना ३३० मिलियन प्रयोगकर्तालाई पासवर्ड परिवर्तन गर्न भनेको हो । यद्यपि पासवर्ड चोरी भएको या कुनै दुरुपयोग भएको प्रमाण भने पाइएको छैन । तर, सावधानी […]
बिहेपछि किन मोटाउँछन् महिला ?
काठमाडौं, २० वैशाख । पुरुष मित्रहरु कुनै स्लिम स्त्रीलाई मन पारेर विहे गर्ने फैसला गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कुरामा सम्झौता गर्नैपर्छ । त्यो के हो भने तपाइँले स्लिम केटीको शरिर विहेपछि पनि उस्तै स्लिम रहन्छ भन्ने पक्का हुँदैन । विहेपछि कुनैपनि महिलाको शरिर भद्धा हुँदैजान्छ । त्यसैले भविष्यमा भद्धा बनेको खण्डमा पनि उस्तै माया गर्ने […]
काठमाडौं, २४ मंसिर । नर्भिक अस्पतालकी निर्देशक मेघा चौधरी अहिले धेरै नेपालीको मन जित्न सफल भएकी छन् । सानैदेखी समाजसेवामा सक्रिय मेघा कोमल मनको धनी छिन् भन्दा फरक नपर्ला । यसको उदाहरण हो वीर अस्पतालमा बेवाारिसे बनेर मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेका व्यक्तिको उद्धार गरेर नयाँ जीवन दिएकी छन् । मृत्युसँग संघर्ष गरी रहेका ति व्यक्तिको पीडादायी […]
अलविदा प्रकाश दाहाल (तस्बिरसहित)
(तस्बिर : हेम राई /अशोककुमार बस्नेत)
ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल (लाइभ)
(सौजन्य : Footylive) Brazil vs Argentina Live Second Half Posted by Rang Entertainments on Friday, June 9, 2017 https://www.facebook.com/groups/mensroomreloaded/ Posted by FootyLive on Friday, June 9, 2017
प्रकाशित मिति: १ बैशाख २०७४, शुक्रबार
नयाँ वर्ष २०७४ प्रारम्भको सुखद् अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनता, हाम्रा पाठक, विज्ञापनदाता तथा शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ! रिपोर्टर नेपाल परिवार
रैथाने उम्मेदवारलाई जिताउँछौँ
हामीले रैथाने एकता परिषद् घोषणा गरेका छौँ । हाम्रा भातृ संगठनहरू छन्, अरु पार्टीहरूको भातृ संगठन जस्तै । रैथाने महिला परिषद्, रैथाने किसान परिषद्, रैथाने विद्यार्थी परिषद्, रैथाने कर्मचारी परिषद, रैथाने रिक्सावाला परिषद् सबै क्षेत्रमाखेल्न लागेका छौँ । हामी दुई–चारजना साथी मिलेर आर्थिक पाटो धानिरहेका छौँ । यो त स्वाभिमानको लडाइँ हो । यसले खासमा […]
कहाँ ‘बरी’ कहाँ ‘कमान्डेन्ट’
प्रकाशित मिति: १० चैत्र २०७३, बिहीबार
काठमाडौं । कहाँ त्यो देख्दा कार्टुनजस्ती लाग्ने हातमा चुरोट, लर्बलाइरहने अनौठो आकृति अनि बुलेटजस्तो बोली र हाँसो भएकी ‘सकम्बरी’ । अनि कहाँ नेपाल प्रहरी विद्यालय सामाखुसी रानीबारीकी ‘कमान्डेन्ट’ । शर्मिला गुरुङले यी दुवै भूमिका निर्वाह गरिन्, पहिलो भूमिका रिल लाइफमा अनि दोस्रो चाहिँ रियल लाइफमा । शर्मिलालाई ‘सकम्बरी’ उर्फ ‘बरी’को भूमिका निर्वाह गरिरहँदा यस्तो होला […]
धर्मशाला निर्माण गर्न महायज्ञ सुरु
रिपोर्टर नेपाल राजविराज, ५ फागुन । सप्तरीको मलेकपुर गाविस–५ स्थित खुरहुरियामा बुधबारदेखि एम्बुलेन्स सेवा र धर्मशाला निर्माण गर्ने उद्देश्यले श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सुरु भएको छ । बुधबार श्रीमद्भागवत सप्ताह पुराणको पूर्वसन्ध्यामा मलेकपुर, खुरहुरिया, छपकी, भथौला, धौनकी, अण्डीपट्टी, बाजितपुर, सिम्राहा सिङ्गियोन लगायतका गाउँबाट सहभागी महिलाले स्थानीय घोडदह नदीमा जल भरेर खुरहुरियाको रामजानकी मन्दिर, जमुनी, […]
यी हुन विश्वका दश सबैभन्दा ठूला मेशिनहरु
प्रकाशित मिति: ३ फाल्गुन २०७३, मंगलवार
१. एन्टोनोव एएन २२५ म्रिया (ANTONOV AN-225 MRIYA) २. GREG DUNHAM’S BIKE ३. सुपर डोजर (5D75A-3SD SUPER DOZER) ४. ENERGY PARTICLE ACCLERATOR MACHINE ५.मैकेनिकल स्पाइडर (GIANT MECHANICAL SPIDER) ६.OVERBURDEN CONVEYOR BRIDGE F60 ७.लीभेर टस् २८२ बी ट्रक ( LIEBHERR T 282B TRUCK) ८.GUSTAV GUN ९.टी क्रूप-खन्ने मेशिन (THE KRUPP DIGGING MACHINE) १०. LIEBHERR HUGE SCOPE
जोर्नी दुख्ने समस्याबाट बच्न जान्नुस यी ५ उपाय
प्रकाशित मिति: १ फाल्गुन २०७३, आईतवार
आजभोलि धेरै जसो मानिसहरुमा जोर्नी दुख्ने समस्याको गुनासो हुने गर्छ । हुन त जोर्नी दुख्ने समस्या उमेरसँगै देखापर्ने एक समस्या हो, तर यसबाट बच्नका लागि सुरु देखि नै सचेत हुनु जरुरी छ । यदि तपाई चाहनुहुन्छ कि तपाइलाई यस्तो समस्या नहोस भने आफूले खाने कुरामा विषेश ध्यान दिने गर्नुस । १. लसुन : लसुनले जोर्नीको […]